LED Garage Series ukukhanya
LED Umsebenzi Light
Shenzhen Youlumi Co.LTD ligxininisa iimveliso LED iimveliso zokukhanya. Thina ndiqhayise ngobuchule kunye namava kwiqela R & D, ndandizimisele ukoyisa mngeni yophuhliso, imveliso kunye nokuhanjiswa iimbonakalo izibane mveliso. amalungu eqela yashukumisa Youlumi iya phambili yenkampani kwiteknoloji LED. Ukubeka njengodondolo kontanga yayo kolu shishino.
Yamiselwa kweyeKhala yama-2012, siye sizimisele ekuveliseni iLED ibhalbhu kunye nokukhanya corn iimveliso. Ngo-2013, siye yadlalwa ngempumelelo 150W kunye 200W corn izibane zethu ezintsha leyo oluqulethe umqhubi olungisiweyo. uluhlu yethu imveliso gqolo uyakhula ngoku iquka 250W, 300W njl imifanekiso.
Sithetha nje, flagship 250W corn ukhanyiselo lwethu ithatha ngokupheleleyo 400W kunye 1000W wazifihla umthombo ukukhanya. Ngowe-2014, iikiti zethu zokufakelwa kwakhona ngo-80W, 100W njl iimveliso Ezahlukeneyo bafakwa emarikeni. bay yesitalato izibane zethu eziphakamileyo zifumene apreyizali elungileyo yomxumi ezininzi ngayo.
Isicelo ephambili iimveliso zethu izitora, kudederhu lweevenkile, izibonelelo zorhwebo kunye nezicwangciso ezahlukeneyo nangaphandle. Ezi mveliso ngaphandle eyenziwa ezizezinye kwimarike yaseYurophu American. iimveliso zethu efanelekileyo ngokubuyisela yonke imithombo ukukhanya ugugile kuquka CFL, HPS, LED UV ephilisa Systems kunye iimbumba Metal Halide ukuze ekubeni ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla. Eyona njongo yethu iphambili kukunceda abathengi bethu ngokunciphisa iindleko zabo umbane kunye nokuphumeza iwonga friendly enviromentally.
Yethu yenkampani sesikwenzile, yembutho ebomini, ugxininise ngaphandle iimveliso iimveliso kukhuphiswano. Ngokwenene nethemba uphuhliso efanayo kuyingenelo kunye nentsebenziswano.